रोचक / विचित्र Archives -
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान […]
आँखी भौ पातलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरि बनाउनुस बाक्लो (भिडियो)
December 17, 2018 Spnews 0
सुन्दर बन्नको लागि शरीर मात्रै राम्रो भएर हुदैन । शरीरका विभिन्न अङ्गहरु पनि उत्तिकै राम्रो हुनु पर्छ अथवा बनाउनु पर्दछ । बिशेष गरि महिलाले आफ्नो शरीरको सजावटमा सधै ख्याल गर्ने गर्दछन । अनुहार,हात,खुट्टा कपाल देखि […]
कुन राशी भएका व्यक्तिलाई कुन पेशा शुभ हुन्छ ? जानी राख्नुस
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा कुनै पनि काम शुरु गर्नुपुर्व ज्योतिषसँग परामर्श लिने गरिन्छ। राशि अनुसार काम नगर्दा कतिपयलाई असफलता मिल्ने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशिले कुन काम गर्दा शुभ हुन्छ ? मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिलाई […]
यस्तो देश जहाँ मानिस एउटा कब्रस्थान भन्दा सानो ठाउँमा जीवन गुजारा गर्छन (फोटो फिचर)
December 15, 2018 Spnews 0
गाँस,बास र कपास मानिसको मूल आधारभूत आवश्यक हुन् । मानिसले गाँस,कपासको व्यवस्था पछि मात्र बासको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । आधुनिक शहरको विकाससँगै मानिसका आवश्यक पनि बढ्दै गएको छ । विकसित मानिएका ठुला शहरमा केहि मानिस आपनो जीवन एउटा कोठामा जीवन […]
अब सार्वजनिक सवारी साधानले यात्रु पर्खेर बस्न नपाउने
काठमाडौँ । बढ्दो सवारी जाममा कमी ल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबारदेखि टुँडिखेल आसपास क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधानले यात्रु पर्खेर बस्न नपाउने गरी ओराल्ने र चढाउने (पिक एण्ड ड्रप) अभियान शुरु गर्दैछ । एउटा सवारी साधनले केही […]
जिरी नेपालको जनकपुर अञ्चल, दोलखा जिल्लामा अवस्थित पर्यटकीय केन्द्र हो। राजधानी काठमाडौंबाट १ सय ८८ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ। जिरी अरनिको राजमार्गको खाडीचौरबाट १ सय १० किलोमिटर टाढा पर्छ । तामाकोशीको गडगहाडट, चारैतिर हरीयाली, डाँडाबाट झररिहेका सुन्दर झरना तथा ग्रामीण […]
मंगलबार जन्मिएका व्यक्तिको यस्तो हुन्छ भविष्य र आचरण [सेयर गर्नुहोस्]
एजेन्सी । मंगलबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण । ज्योतिष शास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र […]
यसकारण हुनमान बनेका थिए भगवान शिव
भगवान शिव भक्तको पूजाबाट छिट्टै प्रसन्न हुने देव मानिन्छन् । भगवान शिव हरेक युगमा आफ्ना भक्तको रक्षाका लागि प्रकट हुने विश्वास पनि गरिन्छ । भगवान शिवले १२ रूद्र अवतार लिएका छन् । शिव महापुराणमा भगवान […]
पाथिभरा माता उत्रीए पछि: रुने, कराउने, चिच्याउने गर्दै यसरी बने धामी (भिडियो)
पाथीभरा देवी विश्‍वास आस्था एवं पवित्रताकी देवी हुन । त्यसैले पाथीभरा धाममा त्यसरी नै जानुपर्ने हुन्छ। धाममा जानलाई कुनै जात, धर्म वा लिङ्गको भेदभाव छैन र बन्देज छैन । “मनमा शुद्धता, देवीप्रतिको भक्तिभाव राखे पुग्ने […]
कुन राशीले आफ्नो धनसम्पति कहाँ राख्दा उत्तम ?
December 14, 2018 Spnews 0
काठमाडौं । पैसा कमाउनुमात्र ठुलो कुरा होइन । कमाएअनुसार बचाउन सकिएन भने पैसा कमाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । आज हामी तपाईँहरुलाई राशीअनुसार घरको कुन भागमा पैसा राख्दा सम्पन्नता र समृद्धी आउँछ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ […]